SIDA LOO MILIXIYO IYO PICKLE BOQOSHAADA GREENFINCH EE XILLIGA QABOOBAHA: CUNTO AH - MUSHROOMS
Boqoshaada Greenfinch: cuntooyinka bannaan ee jiilaalka
Zelenushki waa boqollaal aad u badan oo leh sumcad naxariis leh. Inkasta oo ra'yiga guud ee ku saabsan suntooda iyo xaqiiqooyinka soo noqnoqda ee sunta, koobabkan kaynta ayaa weli ah saxaarada ugu jecel badan qoysaska Ruushka. Waxaa la rumeysan yahay in si fiican u diyaarisay cawska cagaaran ma waxyeelayn karaan, laakiin farxad gastronomic ayaa hubaal. Tixgeli cuntooyinka ugu caansan ee loo yaqaan pickling iyo pickling.
Sida loo nadiifiyo loona dhaqo boqoshaada cagaaran
Green ryadovki tixgeliyey boqoshaada sida caadiga ah la cuni karo. Waxaa lagu kala soocayaa tinqiga qotada dheer ee jidhka, taas oo xitaa ka dib daaweyn kuleyl ah. Qaabkeeda cayriinka iyo iyada oo aan diyaarin gaar ah, badeecadu maaha mid ku habboon isticmaalka. Marka la eego joogitaanka walxaha sunta ah ee ka kooban habka greenfinches, hab kasta oo diyaarintooda waxay ku lug leedahay nadiifinta nadiifinta iyo maydhashada meydadka. Intaa waxaa dheer, hadiyadaha dabiiciga ah ayaa inta badan laga helaa substrates bacaha iyo bacaadka, sidaas darteed xirtooda iyo lugaha ayaa inta badan ku qarqin kara ciid. Qaar ka mid ah picking mushtaraha ayaa xitaa ka qodo boqoshaada yar yar.
Waa muhiim! Marka ururinta zelenushek u baahan tahay si gaar ah taxaddar, sababtoo ah boqoshaada kuwaas oo leh laba mataano ah. Waxaan ka hadleynaa taxanaha suntan, taas oo lagu kala gooyay cabirkeeda yaryar, midabka huruudka ah-caleemaha ee jirka, dhadhanka qadhaadh iyo ur xun. Safarada isku midka ah ee kulaylka ah iyo kuwa xagal u goynaya ayaa loo tixgeliyaa khatar yar Waxay sidoo kale urayaan xumaan iyo jidhka qadhaadh.
Waxaa lagugula talin karaa in aad isla markiiba iska daadato haraaga ciidda, iyo gurigaaga koobabka la uruuriyo waa in lagu qooyay saacad biyo kulul. Inta lagu jiro wakhtigan, taarikada musqusha waxay si buuxda u furi doontaa, u ogolaanaysa qaybaha ciidda in ay ka baxsadaan gudaha. Si kor loogu qaado geeddi-socodka, 10 daqiiqo kasta waxaad u baahan tahay inaad walaaqdo qashinka. Hooyooyinka qaar ayaa kugula talinaya in lagu daro si loo diyaariyo xal milix ah oo gaar ah. Waa muhiim in dareeruhu yahay 3-4 jeer ka badan tirada tirada miro. Intaas waxaa dheer, inta lagu jiro wakhtiga la qoondeeyey, biyaha ayaa u baahan doona in la bedelo ilaa 3 jeer. Ka dib markaa, boqoshaada si gooni ah ayaa loo dhaqaa oo loo wareejiyaa weel kale oo qoto dheer. Marxaladda ugu dambeysa ee diyaarinta, boqoshaada waa in lagu dhaqaa biyo biyo ah si looga saaro hadhaaga milixda.
Ma taqaanaa? In Europe Medieval, greenfinches iska leh category ee hadiyadaha ugu caansan ee kaynta. Suuqyada waxaa lagu iibiyay sheyga oo leh khudbado jilicsan iyo moraleed.
Sida loo milixo boqoshaada greenfinch jiilaalka
Waxaa jira cuntooyin badan oo loogu talagalay koobabka kaynta ee xilliga jiilaalka. Dad badan oo xittaa mushaharku waxay ku foogan yihiin hababka hoose ee salting iyadoo la qallajinayo, iyo sidoo kale miirashada. Laakiin dhawaanahan, daabacado cilmi-baarayaasha ayaa uga digay ecology xun iyo sumowga suntu waxay bilaabeen inay u muuqdaan kuwo badan oo marar badan. Sidaa darteed, tiknoolajiga qaboojinta qaboobaha waxaa lagu dhaqmaa taxaddar iyo wax ka yar.
Habkani wuxuu salposting kaliya ee jaleecada hore u muuqataa fudud. Hawlgalka, waxaa jira shucaac, jaahwareer taas oo saameyn ku yeelan karta caafimaadka macaamiisha.
Baro sida loo kalluumeeyo boqoshaada xilliga qaboobaha ee gasacadaha, iyo sidoo kale qaansiirta qajaarka iyo boqoshaada duurjoogta ah.
Sidaa darteed, waxaan sii wadaynaa inaan shaqeyno:
Ugu horreyntii waxaan u baahannahay inaan u diyaarinno dareeraha si aan u qulqulo cagaarka. 5 kg oo kasta oo ah boqoshaada waxaan ku kala jareynaa hal milaas oo ah milix miis ah baaldi biyo diirran.
Hadda boqoshaada la nadiifiyey oo la maydhaa xal saliideedka ah ee baaquli weyn oo dhalaalaya. Sidaas awgeed waa inay istaagaan ugu yaraan 10 saacadood. Waa muhiim in muddadan loo badalo biyaha ugu yaraan laba jeer.
Kadib markaad nuugeyso meydka miro waa in mar labaad la dhaqaa biyo cusub.
Kadibna waxaad si toos ah ugu socon kartaa salting. Si loo dhammeeyo, waxaan qaadanaa weelka dhalaalay, oo wuxuu ku daboolaa biyo karkaraya oo gudaha ah, ha qallajin oo sii foornada caleemaha madow oo la dhaqay iyo walaaqka hoose. Ku dhaji lakabka boqoshaada korkiisa caleemaha, oo mar kale maro. Geedi socodka isbeddelka ayaa la celiyaa ilaa safafku dhammaado.
Lakabka ugu sarreeya ee digsiga wuxuu noqon doonaa wareegga alwaax ama saxan iyo maryo faashad faakiis ah oo lagu daboolay dhowr lakab. Ku dheji culus.
Hadda brine waxaa lagu daadin karaa weelka. Diyaarinteeda waxaad u baahan doontaa inaad karkariso 3 litir oo biyo ah oo aad ku milmto qiyaasta cusbada.
Pickle waa in lagu hayaa qol qabow mudo bil ah. Si aad u ilaalin fiican ee shaqada, waa muhiim in heerkulka hawadu ay ahaato heer + + 5-6 ° C. Heerarka xasaasiga ah ee heerkulbeega lama ogola.
Waa muhiim! U hubso inaad si joogto ah u hubiso xaalada pickles iyo joogitaanka brine-ka. Fikrad ahaan, waa inay daboolaan greenfinchs ugu yaraan 1 cm. Haddii ay dhacdo uumeysiga, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso mid cusub iyo kor. Haddii caaryaradu ay sameeyeen dushiisa, waa in laga saaraa, iyo maro faashad ah iyo goobaabin alwaax ah waa in si fiican loo dhaqo biyo diirran.
Salting leh blanching
Habkani waxaa loo tixgeliyaa in uu yahay mid la isku halayn karo tan hore.
Kadib diyaarinta iyo dhaqidda miro-khudradda, wuxuu u arkaa tallaabooyinka soo socda:
Daadinta cagaarka cagaaran nadiif ah digsi dhalada oo ku shub biyo si aad u daboosho. Isku kari kari ilaa iyo 10 daqiiqadood oo kale.
Kadibna, adigoo isticmaalaya dharbaaxo, waxaan helnaa boqoshaada oo si deg deg ah ugu daadi 3-4 daqiiqo biyo qabow oo qabow.
Dhanka kale waxaan dabooli hoose ee enamelware nadiif ah oo qalalan leh caleemaha currant, malayga iyo cherry.
Mar labaad, waxaan ka soo saarnaa ryadovki biyaha oo ku faafay lakabyada, si deeqsinimo ah ku shub milixda (qiyaasta 50 g halkii kilo ee cagaarka), dill, dhir, ilko qajaar ah (aan ka badnayn 6 xabbo) iyo xaleef celceliska. Dusha sare waa inuu ka kooban yahay caleenta.
Daboolka qajaar la daboolo goobo alwaax ah, oo ku dabool dharka leh balaasti nadiif ah oo khafiif ah oo daboolan.
Weel ka mid ah pickles waa in looga tagaa 1 maalin oo jikada ka mid ah, ka dibna la dhigo qol qabow. 2 toddobaad kadib saxanka ayaa diyaar u ah inuu cuno.
Waa muhiim! Haddii boqoshaada cusbayn lagu shubo qaybo khafiif ah oo xididdada malayga ah, caaryada waligood ma sameysmi doono brine.
Video: sida loo soocdo cagaarka
Marinadada musqusha waxay caan ku yihiin farsamada. Waxaa lagu dhejiyaa suuqyo badan waxayna ku wada jiraan meesha ugu dambaysa miiska kasta. Waxaan kuugu talineynaa inaad si fudud u-diyaarisid, laakiin dhadhan gaar ah, qashin.
Si aad u sameyso baaskiil noocan oo kale ah, waxaan u baahanahay:
1 kg oo saf ah;
800 ml oo biyo ah;
200 ml oo ah khalka miiska (9%);
40 g cusbo dhagax ah;
20 garaam oo sonkor ah;
5 xabo oo khudradeed;
2 Baay oo caleemo;
caleenta currant madow, cherry, malayga;
Si aad u dhadhamiso, waxaad ku dari kartaa dhirta kale, taas oo lagama maarmaan u ah hagaajinta dhadhanka. Ka dib oo dhan, greenfinches ka boqortooyo boqosha ah oo aan la barbarin dhadhan gaar ah. Sidaa daraadeed, xaaladdan, waxaad u baahan tahay inaad soo iibsato on arsenal wanaagsan oo dhir udgoon.
Marxaladan qotada dheeriga ah waxay ka kooban tahay dhammaan walxaha la soo sheegay, marka laga reebo khal. Waxaa lagu daraa biyo karkaraya oo karkaraya. 5 daqiiqo ka dib, isku dar khal iyo dabka demi.
Ma taqaanaa? Faransiiska dhexdhexaadinta ah, jimicsiga ayaa mamnuucay dadka caadiga ah ee ka soo gala qashinka cagaaran ee kaymaha leh iyaga. Waxay u baxeen naftooda. Iyo wadaagayaasha ayaa loo oggolaaday inay ugaadhsadaan riyaha iyo qaar ka mid ah noocyada lamelaha ee boqoshaada qiimaha hooseeya.
Nidaaminta habaynta iyo kaydinta
Marinating waxaa loo samayn karaa laba siyaabood. Kow ka mid ah iyaga ayaa si toos ah u bixiya boqoshaada kalluunka si toos ah marinade, iyo kan labaad - ku shubay miraha si gooni ah loo kariyey ee gasacadaha. On 1 kg ee greenfinches la kariyey waxay u baahan doontaa 300 g oo marinade ah.
Halkan waa talaabo tallaabo tallaabo ah ee habka ugu horreeya ee loogu talagalay bilowga:
Buuxi koobabka la diyaariyey marinade iyo karkari kuleylka hooseeya ilaa 40 daqiiqadood. Waxaa muhiim ah in aad si joogto ah u walaaqdo bistoolada isla mar ahaantaana ka saar xumbada karkaraya dusha sare.
Ka dib waqtiga la cayimay, ku shub waxyaabaha ku jira digsiga galay barmiilaha laisugu shubay.
Laga soo bilaabo sare ee awood kasta waxaan ku shubi 1 tbsp. l saliidda khudradda ee ka hortagaya caaryada.
Waxaan xidhnaa dhalooyinka leh naylon naylo ah oo u raraan meel qabow halkaas oo heerkulku uu yahay heerka + 1-6 ° C.
Haddii aad jeceshahay habka labaad, sii karkaraya boqoshaada la dhaqay 15 daqiiqo, ku rid dhalooyinka iyo ku shub karkarinta marinade sare.
Ma taqaanaa? Xaqiiqdii, toadstools ma ahan mid khatar ah sida cidhibta cagaarka. Tusaale ahaan, si aad ugu sumoobo agaric, waxaad u baahan tahay inaad cunto qiyaastii 4 kg oo ah jirkiisa miro. Laakiin hal qol toad waa ku filan inuu dilo 4 qof.
Xusuusnow in ryadovki cagaaran ay ku jiraan sunta. Sidaa daraadeed, amniga, waxay u fiicnaan doontaa in la kariyo ilaa 25 daqiiqo markaad fureyso balaashka la soo qaado. Haddii seerka la xiro dabool bir ah, kaas oo shaki ku jira oo lagu gartaa inuu kufsado, ha ka waabanin inuu tuuro alaabtaas oo kale. Maskaxda ku hay in goosashada miro-gureedka ee inta badan ay halis u tahay botulism. Iska ilaali jirro jeermiska cudurada halista ah waxay noqon kartaa keli ah. Hadda waxaad taqaan waxa la qaban karo goosashada zelenushek. Muhiim ma aha in lagu qaldo inta lagu jiro aaska aamusan. Iyo ka shaqeynta badeecadda ma aha mid dhib badan waxayna ku jiri doontaa awoodda xitaa macmacaanka casriga ah.